Izindaba - Ungamkhetha kanjani umxube wokuzilayisha, khumbula lawa maphuzu amane
1, Lungisa imingcele yezobuchwepheshe ye-self feed mixer, isibonelo, singabheka ukuthi yiziphi izinjini zezimoto ezikhethiwe, ivolumu ingakanani, nokuthi iziphi izigaba ezisebenzayo.
2, Kahle idumela nomkhiqizi yokudla okuzenzakalelayo mixer ukhonkolo, bese ukhetha abanye abakhiqizi abadumile okuzenzakalelayo yokudla mixer ukhonkolo esimweni lokuthenga. Ngoba ukuhlolwa komsebenzisi akutholakali, kuphela ngomsindo wokunakekelwa kwangemva kokuthengisa okuthengisa, singaqinisekisa ukuthi insiza yemishini ngokuhamba kwesikhathi. Ngakho-ke, uma sithenga, imikhiqizo edumile kungashiwo ukuthi iyisiqinisekiso sekhwalithi.
3, Uma ucabanga ukuthi ingabe kulula ukuthenga izingxenye nezakhi, kulula ukuthenga okuxhuma okugcwele okuzenzakalelayo kokuxuba ukhonkolo. Kodwa-ke, uma izingxenye nezakhi ziphukile, sidinga ukwenza ukuqaqa nokufaka okunye ngokushesha. Ukuthi izingxenye zokuqala nezakhi zinganikezwa khona manjalo futhi kuyinkomba esemqoka yokuthi sikhethe isixube sokuxuba esisebenza ngokugcwele.
Endabeni yokukhetha, kufanele futhi sicabangele ngokucophelela izinkinga zesevisi yokuthengisa ngemuva kokuthengisa nokunakekelwa, ukuze kuqinisekiswe ukuthi amaphutha avamile nezinye izingozi zokuphepha zemishini nezinto zokusebenza ezithengwe yithi zingaphathwa ngezinga elithile.